Booliska Somaliland oo Xabisiga Dhigay 2 Wariye Gobolka Sanaag – Goobjoog News
Booliska Somaliland oo Xabisiga Dhigay 2 Wariye Gobolka Sanaag
Ciidamo ka tirsan Booliska Somaliland ayaa deegaanka Dogoble oo ka tirsan degmada Ceel-afweyn ee gobolka Sanaag ku xiray labo weriye oo la kala yiraahdo Maxamuud Cabdi Barre iyo Sakariye Axmed Yuusuf , kuwaasi oo la sheegay iney deegaankaas ku gaareen shaqo warbaahineed.
Guddoomiye ku-xigeenka ururka saxaafada Somaliland kayse Axmed Digaale ayaa sheegay iney weriyeyaashaasi qorshahoodu ahaa iney ka soo warbixiyaan deegaanada ay abaarta ba’ani ku dhufteen dhawaanahan, waxaanu cambaareeyey xarigooda oo uu ku tilmaamay mid waxyeello u geysanaya shaqadii warbaahintu bulshada u haysay .
Wasiir ku xigeenka amniga Somaliland Maxamed Muuse Diiriye oo amarkiisa lagu xiray weriyayaasha ayaa sheegay in deegaankaasi ay ka mamnuuceen in shaqo warbaahineed oo aan ahayn ta dawliga ah ay ka waranto, madaama ay ka jirto colaad beelo halkaasi wada dega u dhaxaysa oo wali lagu guulaysan kari la’yahay maaraynteeda, isagoo aan sheegin waqtiga la sii dayn doono labada weriye.
Deegaankan Dogoble ee ay labada weriye ku xiran yihiin waxa ka taagan abaaro aad u daran iyo colaado soo noqnoqday oo u dhexeeya beelo walaalo ah afartii bilood ee u dambeeyey iyadoo colaaddaa ay ku dhinteen dad ka badna 20 ruux oo aano qabiil ku baxay.
Saxaafada Somaliland ayaa iyaduna labadii sanno ee u dambeeysay qabtay cabasho ay ka sheeganayso xukuumadda madaxweyne Siilaanyo, waxaana hadda xiran labo wargeys iyo Afar suxufi oo ay ku jiraan labadan wariye ee lagu xiray Dogoble .
Ajendaha Shirka Brussels, Maalinta 1-aad
Maxkamadda Sare Ee Mareykanka Oo Taageertay Go’aankii Trump
Itoobiya: Abiy Oo Addis Ababa Ku Soo Dhoweeyay Wafdi Ka Socda Eritrea
Maxkamadaha Gobolka Sh/dhexe Oo Sheegay Inay Ku Shaqeeyaan Daruufo Adag
Ciidanka Puntland Oo Howlgal Ka Sameeyey Gaalkacyo
Macallimiinta Soomaaliyeed Oo Ka Cabanaya Dhaqaale Darro Iyo Manhaj La'aan